Halyeyga reer France ee Lilian Thuram oo si cad u sheegay xiddigii ugu adkaa ee uu kahor yimid – Gool FM
(France) 19 Maajo 2020. Daafacii hore xulka qaranka France iyo kooxda Barcelona ee Lilian Thuram ayaa xaqiijiyay in xiddigii ugu adkaa ee uu wajahay uu yahay, laacibka reer Spain ee Pedro Munitis, gaar ahaa kulankii dhex maray labada xul qaran ee Spain iyo France.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu daabacay wareysi uu bixiyay halyeyga reer France ee Lilian Thuram, kaddib markii uu ka jawaabay su’aal aheyd ciyaaryahankii uu kala kulmay dhibaatooyinka ugu badan garoonka dhexdiisa, wuxuuna si cad u sheegay inuu yahay laacibka reer Spain ee Pedro Munitis, kaasoo u ciyaaray kooxo badan ay hoggaamineyso Real Madrid.
Lilian Thuram ayaa inta uu ku gudi jiray wareysigan wuxuu ku sheegay:
“Way fududahay in laga jawaabo su’aashan aniga sheegaya magaca Pedro Munitis”.
“Xusuus weyn kama heysto, magacyada dadka, garoomada, iwm, laakiin waxaan aad iyo aad u xasuustaa Munitis”.
“Waa ciyaaryahanka ugu badan ee igu dhibaateeyay garoonka dhexdiisa, Euro 2000, ciyaartii u dhaxeysay Spain iyo France waan joojin kari waayey”.
“Munitis wuxuu ahaa tartamaa adag, taasna waxaa ii xaqiijiyay saaxiibkeey Karembeu, waana xasuustaa sida aan raaxo u dareemay, kaddib markii uu tababaraha go’aansaday inuu garoonka ka saaro”.